Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0612 lar
Vokatry ny famangian'i Timoty (1 Tes 3:6-10)
Alarobia 08 Aog.
Vakio ny 1 Tes. 3:6–8. Nirahina mba hankahery ny Tesalônianina i Timoty. Inona tamin’ny tatitra nataon’i Timoty no nitondra fifaliana sy fankaherezana ho an’i Paoly? Izany hoe: inona no hitan’i Timoty teo amin’ireo Tesalônianina ka tsara tokoa teo imason’i Paoly?
Ilay hoe “fa (...) ankehitriny” ao amin’ny and. 6 dia tena mivantana. Tsy niandry ela i Paoly fa avy hatrany dia nipetraka nanoratra ho an’ny Tesalônianina. Vantany vao naharay ireo vaovao mahafaly avy tamin’i Timoty izy, dia nanoratra avy hatrany ny epistily voalohany ho an’ny Tesalônianina.
Inona no asehon’ny 1 Tes. 3:9,10 amintsika mikasika ny fiainam-bavak’i Paoly? Inona no lesona tsoahintsika avy amin’izany ho an’ny tenantsika?
Ny tsy fahitana teny toy ny hoe mandrakariva na ny hoe tsy tapaka (vakio ny 1 Tes.1:2) dia toa midika fa nisy zava-baovao teo amin’ny fifalian’i Paoly sy ny fisaorana nataony eto, izay mihoatra ny fifaliana sy ny fisaorana tsy tapaka tsapany mandrakariva rehefa nivavaka ho an’ny Tesalônianina izy. Ny fifaliany sy ny fisaorana nataony ao amin’ny 1 Tes. 3:9,10 dia setrin’ny vaovao izay nentin’i Timoty.
Inona no tsy ampy teo amin’ny finoan’izy ireo (1 Tes. 3:10)? Tsy voambara eo amin’ny tontolon-kevitra mivantana izany. Araka ny hitantsika eo aoriana, ny fanahian’i Paoly momba ny finoan’izy ireo dia mahakasika kokoa ny asa fa tsy ny teôlojia. Ny toko fahefatra sy ny fahadimy dia maneho fa nilain’izy ireo ny nampifandrindra ny asan’izy ireo tamin’ny foto-pinoany. Na dia nanam-pitiavana sy finoana aza izy ireo, sady “tomoetra tsara amin’ny Tompo,” dia hita eo amin’ny tohin’ny taratasy fa mbola nisy zava-dehibe nilain’izy ireo natao.
Nahoana no zava-dehibe tokoa ny vavaka eo amin’ny fiarahantsika mandeha amin’ny Tompo? Manao ahoana ny faharetan’ny fotoana atokanao ivavahana? Inona no ambaran’ ny valin-teninao mikasika ny lanja omenao ny vavaka? Fomba ahoana no hahafahanao mampivoatra ny fiainam-bavakao?